Ihe ị ga-eme mgbe nwatakịrị nwere ikpuru
Ijeghari mgbe niile, ịgagharị ebe niile - a na-achị achị, nke nwere ike, site n'aka nne ọ bụla n'oge ọkụ. Ma mgbe ụmụaka na-agbagharị na ájá ájá, mgbe ụfọdụ, anyị echeghị ihe ize ndụ ha na-adọta n'ebe ahụ. Ka anyị chọpụta ihe ị ga-eme mgbe nwatakịrị nwere ikpuru.
Nwa ahụ ji ịnụ ọkụ n'obi na-akpụ isi na ájá na-esote otu ndị na-eto eto na ndị na-eme nchọpụta, nne ya na-esonyere ndị nne ndị ọzọ ... Ọ dịghị ihe na-agbaji nke a n'ehihie.
Gịnịkwa nwere ike igbochi ha niile ka ha ghara ịga ije? A sị ka e kwuwe, ole na ole n'ime ndị toro eto ugbu a na-eche n'echiche na ájá ruru ájá, ma, ọ bụrụ na nne agbapụ, nwa ahụ na-achọ ịmata ihe ga-ewepụta mkpịsị aka ya n'ọnụ. Na ikpuru na nso nso.
Nke a bụ nnọọ enyo!
Otu nwatakiri nwere ike iburu ikpuru ọ bụghị naanị na igbe ntụba, kamakwa na nri, na-akụ mkpụrụ osisi na-adịghị ọcha na-achaghị acha, ma ọ bụ na-adịghị edozi anụ e merụrụ ahụ ... Na oge opupu ihe ubi na ọkọchị, ihe ize ndụ nke ịtụgharị ahụ gị "ebe obibi maka nje" dị elu karịa, n'ihi na ọtụtụ ụbọchị ụmụaka na-anọ na mbara ikuku. Na ọnọdụ nke ikpuru, ha na-ekwu, bụ griin haus - nsen nke nje nwere ike ịnọgide na ala ruo ogologo oge na atụmanya nke "ndị nwere ikike". Ya mere, olee ihe i nwere ike ime, aga ije ma rie mkpụrụ? Mba, n'ezie. Naanị echefula banyere nchebe, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a. Na tupu nke ahụ, ka anyị jegharịa site na mgbaàmà ahụ na-enyo enyo, nke na-agba akaebe na ndị ọbịa a na-akpọghị akpọbanyeworị n'ahụ nwa ahụ.
Nke a na-egosi site na ihe ịrịba ama ndị a:
Ogbugbu n'ime afo (paroxysmal, nso nsobo osisi), ọgbụgbọ, vomiting.
Ịba ụba nke nwata, pallor, bruises n'okpuru anya.
Enweghị agụụ (karịsịa n'ụtụtụ).
Ihe ị ga-eme mgbe nwatakịrị nwere ikpuru - nwanyị ọ bụla jụrụ ajụjụ a. Ike ọgwụgwụ, mgbakasị, ụra na-echegbu onwe ya na ụra na ezé (toxins nke sitere na ọrụ dị mkpa nke ikpuru na ahụ, na-eme ka akwara na-emetụta ụbụrụ na ụbụrụ, na-eme ka mwepụ nke masticatory muscles).
Ọ na-esi na perineum na mkpịsị ụkwụ. Mgbe ụfọdụ, ikpuru na-akpata ọrịa ndị na-egbu egbu nke tract nwa na nwa na-arịa ọrịa allergies (ee, ihe na-akpata allergies na nwa ahụ, karịsịa "enweghị nghọta", n'ihi enweghị ihe kpatara ya ma nọgide na-adịgide, na-anabataghi, nwere ike ịbụ nje). N'elu ule ọbara n'ozuzu, ọnụnọ nke ikpuru na-egosi site n'ogo dị elu nke eosinophil (mkpụrụ ndụ ọbara nke na-ahụ maka ichebe ahụ megide ntinye nke ndị ọrụ mba ọzọ).
Chọta na neutralize
O doro anya na ọ bụghị ezughị ezu iji mee nchoputa. Otu ihe mgbu ma ọ bụ bruises n'okpuru anya nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà nke ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na mgbaàmà nke malaise apụta, nwatakịrị kwesịrị ịgakwuru dọkịta. Ọ bụ ezie na ịchọpụta nje, ọbụna ndị dọkịta adịghị mfe. Ọnọdụ ahụ na-eme ka ọnọdụ ahụ dịkwuo njọ site na mgbe mgbe ha na-abanye n'ime ahụ n'ozuzu ha na-enweta ọhụụ. Dị ka a na-achị, na-enyo na ikpuru nwa ahụ zitere maka nyocha (nyocha nke feces maka ikpuru akwa). Mana iji chọta ndị ọbịa a na-akpọghị, ị ga-agbaso ụfọdụ iwu. Nke mbụ, anyị chọrọ "ihe onwunwe kwesịrị ekwesị" (nke a na-achịkọta ọhụrụ), nke abuo, a na-eme nnyocha ahụ ọ bụghị otu ugboro ma ọ bụ ugboro ise (nkeji oge nke izu, na-eburu n'uche mmepe mmepe nke ikpuru na protozoa). Ọbụna na ụzọ a, ihe a apụtaghị mgbe niile. Ya mere, ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa na-atụ aro, n'agbanyeghị ule, iji mepụta usoro mgbochi ugboro abụọ n'afọ. Nlekọta nke oge a megide pinworms dị mma: na-adịghị egbu egbu, na-eme ihe nrịanwụrụ na mpaghara gị, na eriri afọ.
Kedu ihe m kwesịrị ime ma nwa m nwere ikpuru? Abanyela na ọrụ onye na-amu amu, ma jụọ dọkịta ma soro ndụmọdụ ya. Ngwọrọgwu ndị mmadụ, dịka ihe ọṅụṅụ carrot (30-50 ml kwa ụbọchị), ugu osisi, garlic, walnuts, pọmigranet, strawberry ọhịa, nwere ike na-ewere dị ka ụzọ inyeaka na-alụ ọgụ helminthiasis.
Ejila nwayọọ nwayọọ na-eme ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ewepụghị ikpuru, ha nwere ike ime ka ahụ mmadụ na-egbu ya ma kpasuo ọrịa na-adịghị ala ala nke akụkụ eriri afọ. Dọkịta ahụ ga-akọwa ọgwụ. Aghaghachị nke ọma na-adịworị na mbido mbụ nke ọgwụ, ma maka ọgwụgwọ zuru ezu ọ dị mkpa iji nweta usoro zuru ezu, wee megharịa ya (ugboro 2-3 na nkeji izu abụọ). Site n'ụzọ, ọ bụrụ na a hụrụ helminths na nwatakịrị ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ọ ga-eme ka ndị niile nwe ụlọ "nhicha" ka ha wee ghara ịrịa ọrịa ọzọ. N'agbanyeghị okirikiri nke eserese eserese, ọ dị mma ịmara na ahụike dị mma nwere ike imeri nsogbu ndị ahụ. Ma ọ na-alụ ọgụ nanị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-enwekarị akụkụ ahụ, karịsịa akụkụ eriri afọ. Ruo ugbu a, lee, nke a bụ ihe ọzọ karịa nchịkwa.
Iwu ahụike ise
Ọ gaghị ezu iji gwọọ nwatakịrị nke mwakpo helminthic ma chefuo banyere ahụmahụ nke nrọ, nọrọ na nche. Iji mee nke a, gbasoo iwu 5 nke mgbochi.
Nri akwukwo ocha, akwukwo nri na akwukwo n'okpuru mmiri na agba, karia ndi nke nwa ahu ga eri. Ekwela ka o rie nkpuru ruru unyi. Mkpụrụ osisi nke na-eto na nso nso nke ala ahụ, ịkwesịrị ịwụ mmiri na-esi esi ma ọ bụ bepụ mmiri ha.
Kụziere nwa gị isi ihe ndị dị mkpa maka ịdị ọcha onwe gị: saa aka gị mgbe ọ bụla o kwere mee, ebula mkpịsị aka gị n'ọnụ gị, wdg.
Ọtụtụ mgbe, ịgbanwe akwa (otu ugboro n'izu) na nwata kwa ụbọchị.
Na-ehichapụ mmiri mgbe nile n'ụlọ, ị nwere ike ijikọta obere nhicha.
Ugboro abụọ n'afọ, na-eme ihe ọmụmụ mgbochi megide ikpuru.
Mmiri na peaking
A na-ekwenyekarị na n'oge opupu ihe ubi, enwere ike ime ka ọrịa niile dị njọ. Nke a bụ eziokwu. Ma, mgbe ụfọdụ, oge opupu ihe ubi amalitela inwe mmetụta nke ndị na-adịghị mma na ndị dị mma.
Ihe kpatara ọtụtụ nsogbu ahụike anyị nwere ike ịbụ ọrịa ọrịa helminthic. N'iji ahụ anyị na-eri nri dị mkpa maka ndụ ndụ zuru oke, ikpuru na-anapụ anyị ihe ndị dị mkpa maka ndụ zuru ezu. Tụkwasị na nke ahụ, ikpuru hapụrụ ihe ndị na-egbu egbu nke ọrụ dị mkpa ha. Ihe ndị a na-egbu ahụ anyị, na-akpata mmeghachi ahụ nrịanrịa, mmekpa ahụ nke ọrịa nke akụkụ eriri afọ na mgbagwoju anya dị nro, dịka ịchacha ọbara, afọ ọsịsa, ma ọ bụ afọ ntachi.
Ndị na-egbuke egbuke na-abanye n'ahụ mmadụ dị ka nwa ogwu (site na aka ruru unyi, site na anụ nke ụmụ anụmanụ na-azụ na azụ, si anụ ụlọ) na, mgbe ọ ghọworo onye na-eto eto, na-etolite na okenye. N'ihi eziokwu ahụ bụ na worm ji nlezianya kpuchie ọnụnọ ya n'okpuru mgbaàmà nke ọrịa ndị ọzọ, ọ na-esiri ike ịchọpụta ma họrọ ihe ngwọta maka ya. Na mgbakwunye, ụdị ụdị irighiri (na Russia nwere ihe karịrị 30!) Nyocha dị iche iche kpebiri.
Nke a bụ ihe mere e ji kee ọgwụ ọjọọ antihelminthic dịgasị iche iche. Ọ dịkwa oke irè megide ụdị ikpuru dị iche iche a maara na oge ọ bụla nke mmepe ha - site na nwa ahuhu na nwa irighiri. Ngwọta nchedo bụ nanị ụbọchị atọ (otu mbadamba otu ụbọchị) - anyị nwere ike ijide n'aka na anyị ga-ezute mmiri na-enweghị nje.
Ihe ndị na-akpata ibu arọ na ụmụaka
Okpomọkụ n'ime ụlọ nwa
Olee otú ejiji akwa nwa
Họrọ ndị ntanetị
Ọrịa nsia na-egbuke egbuke n'ime ụmụaka, ọgwụgwọ
Mkpụrụ obi ụmụaka: nchịkọta atọ nke ọgụ mgbagwoju anya
Mgbu na ụkwụ nke ụmụntakịrị
Tea Mushroom - dọkịta ụlọ
Kedu esi anakọta na nnu mushrooms?
Ihe ịrịba ama nke ịka nká
Esi zere esemokwu n'ezinụlọ na ndị enyi
Njirimara na-agwọ ọrịa nke mmanụ aṅụ linden
Ndobe na ụdị Grik
Salad na saladet salad na cheese Mozzarella
Achịcha - ihe atụ nke ịdị ọcha nke ezigbo nwanyị
Na-akpụcha "ose" hell
Sauna infrared: contraindications
Ogologo njem nke 2014: ebee ka ị ga-ezu ike?
Kedu ihe bụ ahụike, gịnị mere o ji dị mkpa na otu esi echekwa ya
Ụzọ iji nye ụlọ obibi gị ụlọ
Allen Carr bụ ụzọ dị mfe iji wepụ ibu
Emega ahụ maka afọ na-adaghị adaba
Spaghetti na shrimps na creamy tomato ihendori
Iwu maka nhọrọ nke akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị